စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): January 2010
Saturday, January 30, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:32 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~ စစ်တိုက်တမ်း ကစားခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ် ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ ဖားကလေးဖမ်းပြီး ရင်ခွဲခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ ဝေဖာချပ်လေးနဲ့ အိမ်ဆောက်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ ရန်ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် လက်ဝှေ့သမား ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ သူငယ်ချင်းတွေကို ပုံပြောကောင်းခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ ခဲတံနဲ့ အရုပ်ဆွဲခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ပန်းချီဆရာ ဖြစ်မလာဘူး။
~~~~~~~~~~~~~~~~ ကားခိုးမောင်းခဲ့ဖူးတယ် ဒီတစ်ခါတော့ ကားဆရာ လာဖြစ်နေတယ်။
ငယ်ငယ်က အတွေးတွေဟာလည်း အမှန်တရားပဲ။ ခုဖြစ်နေတာလည်း အမှန်တရားပဲ။ ခုတွေးနေတဲ့ အတွေးတွေ၊ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု နှောင်းပိုင်းမှာ ငယ်ငယ်က ဆိုပြီးတော့ ငါ စာပြန်ရေး နိုင်ဦးမှာလား။
Monday, January 25, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 12:46 PM
မောဟများတဲ့ လောကမှာ သင် လောဘတွေနဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့တယ်နော်။
နင်းပြားဘ၀နဲ့ လောကကိုလည်း သင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ ပြီးပြီနော်။
ရီခြင်း၊ငိုခြင်းတွေနဲ့ လောကကို အများနည်းတူ သင် မှတ်ကျောက်တွေ တင်ခဲ့တာပဲနော်။
သံသရာရဲ့ ထွက်ပေါက် တရားဓမ္မကိုလည်း သင် ရှာဖွေခဲ့ဖူးတယ်နော်။
လက်ကျန် ရက်စွဲတွေက နည်းပါးလာတော့ လောကကို သင် ကြောက်စပြုလာပြီနော်။
အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားကိုလည်း သင် နာကြားခဲ့ဖူးတယ်နော်။
ဥာဏ်ဦးခဲ့ရင် သံသရာမှာ သင် လမ်းပန်းသာမှာကိုလည်း သင် သိခဲ့တယ်နော်။
ဥာဏ်လည်းဦးပါရဲ့ အသေခရီးကို သင် မလျှောက်ရဲသေးတာကလည်း........?
မကြာတော့ရင် မသာကံစမ်းမဲ ပေါက်မှ အလောင်းလှမယ့် အဖြစ်ကို သင် ကြိုသိနေလို့များလား .......... ?
မသာတွေကများပြီ သယ်ယူသူတွေရဲ့ မနိုင်ဝန်ကို သင် သိနေလို့များလား.......?
အော်..... မိတ်ဆွေ အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် ဆိုတာထက် မသာစရိတ် ပြည့်မှီအောင် သင် ရှာထားဖို့လည်း လိုတယ်နော့။
Monday, January 18, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:21 PM
အပြုံးပန်းများ အသင် ပန်ဆင်နိုင်ပါစေလေ.............
လွတ် လပ် ရေး နေ့
Sunday, January 3, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 8:45 PM
လေးရက် ဇန်န၀ါရီ လွတ်လပ်သည်။
ယခုထိတိုင် လွတ်....လပ် ပါ့။
ဒီတိုင်းဆိုရင် လွတ် ဦးမယ်။
ယူပေးသူက လွတ် စေဖို့
လုပ်ပေးသူက လပ် နေလို့။
လွတ် လပ် ရေးနေ့ဗျ။
Friday, January 1, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 5:35 PM
အဟောင်းတွေ ဆွေးမယ်ထင်သလား ?
အတိတ်တွေ ပျောက်မယ်ထင်သလား ?
ဇရာအိုက တစ်နှစ်လှမ်းခဲ့ပြီ... ။
မင်းရော ဘယ်လိုနေလည်း... ?
အမှားတွေ များလား ?
အမှန်တွေ များလား ?
2009 ကို နှုတ်ဆက်တာ
2009 မှာ လုံးချာလည်လိုက်ပြီး
2010 မှာ .....